Schmeichel: Weyne Rooney waa in uu khadka dhexe u badashaa – Gool FM
Schmeichel: Weyne Rooney waa in uu khadka dhexe u badashaa
Kaafi April 4, 2016
(Manchester) 04 Abriil 2016. Peter Schmeichel ayaa sheegaya in Weyne Rooney uu leeyahay tayo kasta oo uu mashiinka khadka dhexe ee Manchester United ku noqon karo laakiin waa in xiddiga England uu doortaa badalashadda kaalintiisa.
Iyadda oo uu u maqnaa Weyne Rooney dhaawac daraadiis, Anthony Martial ayaa garabka ka dheelay waxa uuna dhaliyey goolkii qura ee ay United uga badisay Everton.
Halyeygii hore ee Denmark waxa uu aaminsa yahay in weeraryahankii hore ee Monoco aan laga dheel siin garbaha balse loo adeegsado weerarka dhexe meeshii Rashford loo isticmaali lahaa kaalintaas.
“Waxaan rajeynayaa in Martial uu ka ciyaaro booska 9-laad,” ayuu Schmeichel yiri. “Waxaan jeclaan lahaa in aa arko isaga oo ka dheelaya booska Rashford maanta ka dheelay. Waxaan xaqiiqdii rabaa in Martial uu noqodo lambarka sagaalaad ee Manchetser United.
“Waxaan qabaa in uu si wanaagsan uga ciyaaro garabka bidix laakiin waxa uu aad halis ugu leeyahay weerarka dhexe.”
Weyne Rooney ma uusan dheelin tan iyo kulankii Sunerland ee dhacay bishii Febraayo laakiin waxaa la filayaa in uu soo laabto is araga iyaga iyo Tottenham ee toddobaadka dambe.
Schmeichel waxa uu taageero weyn u yahay 30 jirka waxa uuna rabaa in laga ciyaarisiiyo khadka dhexe sababo la xiriira sida uu ugu qaab ciyaareed egyahay Paul Scholes.
“Weyne waxa uu ka ciyaari karaa boosas kala gedisan,” ayuu yiri gool hayihii hore ee United. “Hadii aad weydiiso Weyne waxaan qabaa in uu rabo booska 10-naad.
“Laakiin waxaan rabaa in aan arko Weyne oo isu badalay khadka dhexe. Waxa uu u dheeli karaa sida Paul Scholes. Waxaan hubaa waxa uu noqon karaa mashiin khad dhexe.
“Aragtida Weyne, sida uu kubadda cagta u arko waxa ay xaqiiqddii faa’ido u tahay Manchester United sida ay u tahay in ay u dheesho.
“Waxa uu dheel karaa baaska dheer. Shaafto ayuu kici karaa, kubadda wuu soo qaadi karaa wuuna difaaci karaa. Laakiin waa in Weyne uu doonayo ka dheelidda booskaas.”
Waa kuwee kooxaha ugu shabaq ilaaliska badan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan? + Sawirro
Kooxda usbuuca ee Premier League oo la soo saaray… (Chelsea oo xiddigaha ugu badan ku leh todobaadkan)